Tuesday June 18, 2019 - 15:51:53 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wargeyska The Observer ee kasoo baxa magaalada Kampala ayaa saaka aroortii hore soo daabacay in uu xerada Xalane ee magaalada Muqdisho isku dilay Kabtan katirsan ciidanka Uganda kadib markii uu toogasho ku dilay askri Deble ah.
Dowladda Uganda waxay sheegtay in Kabtanku uu isku dilay qori AK47 ah oo uu watay saacado kadib markii uu dilay askari ilaala u ahaa.
Richard Karemire oo ah Afhayeenka guud ee ciidamada Uganda (UPDF) ayaa warbaahinta maxalliga ah u xaqiijiyay dhacdadan cusub ee ciidamadu isku dileen balse wuxuu ka gaabsaday in uu sheego magacyada sarkaalka isdilay kadib markii uu askari saaxibkiisa ah dilay.
Bishii May ee lasoo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho isku dilay illaa sedax askari oo uu kamid ahaa sarkaal sare oo katirsan ciidamada Uganda ee duullaanka ku jooga dalka Soomaaliya.
Dagaalka dabada dheeraaday ee ciidamada AMISOM uga jiraan dalka Soomaaliya ayaa sababay in kumanaan askari ay ku waashaan kadib markii ay qaadeen xaalado nafsaani ah oo ay ka dhaxleen weerarada joogtada ah ee uga imaanaya xoogaga Shabaabul Mujaahidiin.
Sedax isbuuc ka hor weeraro aan joogsi laheyn ayay ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda kula kulmeen wadada laamiga ah ee isku xirta degmooyinka Afgooye iyo Shalaambood, ciidamada ayaa ku dhacay weeraro dhabbagal ah iyo qaraxyo taas oo sababtay in gaadiid laga gubay ay uga tagaan wadada hareeraheeda.
Ciidamada Uganda ayaa ah kuwa ugu daran ee halaagga kula kulmaya dagaalka Soomaaliya oo lugta lasii gelaya sanaddii 12aad oo xiriir ah, khubarada Melleteriga ayaa isku raacsan in haddii ciidan Nidaami ah oo hubkiisu udhanyahay uu ku dabadheeraado dagaalka ku dhufo ee ka dhaqaaqda Jabhadeyska ah uu mooralkiisu dhimanayo ayna sufuuftiisa ku badanayaan falalka isdilka ah ee ka dhashay diifta dagaalka.
Madaxweynaha Uganda baadari Museveni dhibka heysta ciidamadiisa waxba uma arko wuxuuna marwalba Q.Midoobay ka codsadaa in ay ukordhiyaan dhaqaalaha ay dowladdiisu ku qaadato duullaanka Soomaaliya.